Jeylaani Nuur Iikar oo ku Guulaystay Guddoomiye Ku xigeenka 1 ee baarlamaanka DFS
Muqdisho:-Waxaa ku guuleystey jagada Gudoomiye kuxigeenka koobaad ee Baarlamaanka Soomaaliya Jeylaani Nuur Iiker kadib markii uu ka tanaasuley ninkii kusoo xigey C/weli Ibraahim Muudey. Jeylaaani Nuur iiker oo kasoo jeeda qowmiyadaha Banaadiriga ayaa wuxuu noqonayaa ninkii labaad oo weji cusub oo kamid noqda gudoonka Baarlamaanka Soomaaliya kadib markii uu loollan adag la galey ku dhawaad 10 musharax oo u taagnaa jagada Kuxigeenka Baarlamaanka.
Dhanka kale jagada guddoomiye ku xigeenka labaad oo ay isu soo taageen afar musharrax ayaa ugu dambeyntii waxaa ku adkaaday Mahad Cabdule Cawad.
Waxaa sidoo kae a dhaariyay guddoonka Baaramaanka iyadoo hadal kooban oo uu soo jeediyay guddoomiyaha cusub ee Baarlamaanka Prof. Jawaari uu ku sheegay in dadku daallan yihiin isa markaana uu khudbadiisa u dib dhiganayo khamiista soo socota.
Sawaxanka dadka ayaa cirka isku shareertey iyadoo mudanayaasha baarlamaanku ay qaadayeen heesta astaanta u ah qaranka Soomaaliyeed ee soomaaliyeey toos iyo iyagoo ismarxabeysiinayey.
Caawa oo magaalada Muqdisho aad looga dareemayo jawiga ka abuurmay doorashada guddoonka Baaramaanka ahna doorashadii ugu horreysay sano kadib oo halkaa ka dhacda. Doorashadan ayaa waxaa xigta doorashada madaxweynaha DFS oo iyana oo balansan yahay 3 bisha 9aad ee nagu soo aadan
Jeylaani Nuur Iikar ayaa helay 91-cod halka C/weli Sheekh Ibraahim Muudey ayaa helay 58-cod waxaana si rasmi ah u noqday Guddoomiye Ku xigeenka 1 ee baarlamaanka DFS Jeylaani Nuur Iikar .